Taariikhda iyo asalka faraskii Carabta | Fardaha Noti
Qaar badan ayaa sheekooyinka iyo halyeeyada isaga ku saabsan asal ahaan faraskii Carabta. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay in ilaa maanta la oran karo waa runta kaliya ee tartankan kun-sanolaha ah ee asal ahaan degenaa Carabta oo ay fuuli jireen Reer Baadiyaha. Waa a Nadiif ah, oo lagu keydiyey qarniyo badan indha indheyn xikmad leh oo ku saabsan umadaha reer guuraaga ah ee degenaa Jasiiradda Carabta.
Waxaan ku leennahay iyaga inay iyagu ahaayeen kuwii ugu horreeyay codsatay fikradda taranka iyo xulashada xoolaha oo ku saleysan abtirsiinyada, qoysaska, iyo durdurrada dhiiga. Waxay ka raadsadeen astaamaha kale, daahirnimada asalka, iska caabinta iyo xawaaraha weyn ee dagaalada tan iyo markii astaamahan oo dhan ay badbaadiyeen badbaadada wadaha.
Waxaa jira qoraallo iyo sidoo kale xardho taas shukaansiga faraska Carabta ilaa 2000 BC, taas oo macnaheedu yahay inay tahay nooc aasaasi ah oo aan lahayn ciqaab ama iskutallaab, sidaas awgeed waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Pure Breed', oo ah kan ugu da'da weyn, ugu yaraan, waa sida diiwaanada la helay ay muujinayaan.
Astaamaha ugu muhiimsan waa xawaareheeda weyn sidaa darteed fardihii ugu horreeyay ee Carabtu waxay ahaayeen kuwa ku tartama tartamada. Markii dambe waxay ku ballaadhiyeen dhulal kala duwan si sax ah maxaa yeelay waxay ahaayeen faraska ugu fiican ee dagaallada iyo qabsashada. Faraska Carbeed wuxuu ka mid ahaa kuwa loogu doon doonista badnaa uguna baahida badnaa si loo soo saaro noocyo lamid ah oo ujeeddooyin gaar ah leh.
Waana sida ay taariikhyahanadu leeyihiin faraska Carabtu daahirnimadiisa dhiiggu waa tan ugu fiican ee lagu wanaajiyo taranka, sidaa darteed waxay doonayeen inuu noqdo isha asalka ah ee tayada iyo xawaarahaMaanta, isagu weli waa kan ugu horreeya ee dhinacyada iska caabinta. Waxaana la dhihi karaa, si uun, jinsiyada carabta ayaa gacan ka gaysatay sameynta dhamaan noocyada fardaha casriga ah.
Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato Faraska Carabta, Gali xiriirka aan hadda kaaga tagnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Taariikhda iyo asalka faraskii Carabta
Labiska labiska edbinta Olombikada
Garaacista faraska waa hab lagu kasbado kalsoonida